किन विवादमा आइरहन्छिन् कंगना ? Canada Nepal
किन विवादमा आइरहन्छिन् कंगना ?
काठमाडौं - बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री हुन् कंगना रनौत । एकपछि अर्को फिल्ममा व्यस्त भइरहेकी कंगनाले पछिल्लो समय कोरोनाका कारण खासै काम पाएकी छैनिन् । उनलाई विवादले कहिले पनि छोड्दैन ।
एकपछि अर्को विवादमा फसिरहने कंगना फेरि अर्को विवादमा फसेकी छिन् । एक तस्बिरका कारण विवादमा आएकी उनको अहिले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ ।
भारतिय मिडियाका अनुसार एक पार्टीमा उनले लगाएको पहिरनका कारण आलोचना भएको हो । पहिरनका बारे अरुलाई सुझाव दिने कंगना आफैलो त्यस्तो पहिरन लगाएपछि आलोचना भएका हुन् । आलोचकहरूले विदेश जानासाथ कंगनाले संस्कृति बिर्सिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
भाद्र ५, २०७८ शनिवार १६:११:०७ बजे : प्रकाशित